သော့ချက်များစက် Copy | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-keymachine.org
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်-> ထုတ်ကုန်များ -> Key ကို Copy ကူးစက် -> သော့ချက်များစက် Copy
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan သော့ချက်များစက် Copy ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အထူးကျဉ်းကျုတ်မေးရိုးကြီးများနှင့်ကွဲပြားခြားနား tubular keys တွေကိုအမျိုးမျိုး Clamp ။
ဒီအထူးဒီဇိုင်းညှပ်အချင်း 3mm-16mm, ချိုဖြတ်ခလုတ်များကို & မြွေဖြတ် keys ကို၏ tubular key ကိုပွားစေနိုင်သည်။
ဒီရေပြင်ညီအရေးယူလီဗာချောချောမွေ့မွေ့ & အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့သည်းခံခြင်းဘောလုံးကိုသောအရာတို့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပန်းကန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရှုထောင်: 270 မီလီမီတာ (W) * 290mm (ဃ) * 430mm (H)
ဘ 18 ကီလို
GW 20 ကီလို
Meas ။ 2.6 CUFT
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 120W, RPM 8200